Mid ka mid ah raggii loo haystay dilkii Caa’isho Ilyaas oo lagu heshiiyay in la sii daayo | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Mid ka mid ah raggii loo haystay dilkii Caa’isho Ilyaas oo lagu...
Mid ka mid ah raggii loo haystay dilkii Caa’isho Ilyaas oo lagu heshiiyay in la sii daayo
Mid ka mid ah raggii lagu helay dambiga ah kufsiga iyo dilka Caa’isho Ilyaas oo lagu magacaabo Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame ayaa lagu heshiiyay in la sii daayo kadib markii labada qoys ee Caa’isho iyo Cabdisalaan ay heshiis gaareen.
Labada dhinac, ayaa ku heshiiyay in mag la siiyo qoyska dhalay gabadhii Yareyd ee Caa’isha Ilyaas Aaden, islamarkaana xorriyaddiisa dib loogu celiyo xukmane Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame.
Labada qoys ayaa waxa ay ku heshiiyeen in mag gaareysa 75 neef oo geel ah laga bixiyo waxaana isla goobta heshiiska lagu bixiyay qeyb ka mid ah magta oo dhan $25, 000 oo Dollar, taasi oo u dhiganta 50 Halaad.
Waxaana lagu heshiiyay inta dhiman oo ah $12,500 oo Dollar in lagu bixiyo saddex bilood gudahood taasi oo lacag ahaan ku
Ninkan lagu heshiiyay in la sii daayo ayaa waxaa ay walaalo ahaayeen mid ka mid ah labadii ruux ee lagu fulyay dilka qisaasta Caa’isho Ilyaas 11kii bishan waxaana la sheegay in dib loo dhigey dilka Cabdisalaan muddo toban cisho ah.
Previous articleAlshabaab oo isaga baxay degmada Jamaame
Next articleYuusuf Garaad: Qorshaha Al-Shabab ma ahan inay ka adkaadaan DF iyo Amisom